ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်ရအောင် ဆယ်တန်းပြန်ဖြေချင်တဲ့ ချစ်သူအကြောင်းပြောလာတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း - Focus Myanmar
August 20, 2019 By Myanamr Plus in အနုပညာ Tags: အေးဝတ်ရည်သောင်း
ပရိသတ်တွေကို မြန်မာဝတ်စုံလှလှလေးတွေဝတ်ပြီး ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်း ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ မုန်းစွဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ များစွာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်း က သူမချစ်သူ ဆယ်တန်းပြန်ဖြေဖို့ပြောလာတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သရုပ်ဆောင်အေးဝတ်ရည်သောင်းက ခုနောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကို လည်း ရိုက်ကူးနေတာပါ။ ခုလတ်တလော ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဝတ်လဲတော် ရွှေပုဆိုး တန်းထိုးလို့ ကြို မယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ မှ စတင်ရိုက်ကူးဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးဝတ်ရည်သောင်း က သူမချစ်သူ က ဆယ်တန်းပြန်ဖြေချင်တယ်လို့ သူမကို ပြောတဲ့ အကြောင်းကို ခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
” 👦🏻 ဆယ်တန်းပြန်ဖြေချင်တယ်👩🏻 ဘာလို့?👦🏻 ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်ရအောင်ပြန်ဖြေမယ်လေ။👩🏻 အမ် ဘာလို့????👦🏻 အခုလိုနေမကောင်းဖြစ်တော့ ကိုယ် ကြည့်ပေးလို့ရတာပါ့။👩🏻 ကြွေ ☺️စူပါဆန်းဒေးပါ။” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
ချစ်သူက သူမနေမကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့် ဆယ်တန်းကို ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်ရအောင်ပြန်ဖြေချင်တယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ရင် နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သူမကို အနီးကပ်ကြည့်ပေးလို့ရတယ် ဆိုပြီးပြောလာတယ်လို့ ပြောထားတာပါ။
အေးဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ ချစ်သူဆယ်တန်းပြန်ဖြေချင်ရတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေ သိရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့ရအောငျ ဆယျတနျးပွနျဖွခေငျြတဲ့ ခဈြသူအကွောငျးပွောလာတဲ့ အေးဝတျရညျသောငျးပရိသတျတှကေို မွနျမာဝတျစုံလှလှလေးတှဝေတျပွီး ရိုးရိုးယဉျယဉျ ပုံရိပျကလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားထားတဲ့ သရုပျဆောငျ အေးဝတျရညျသောငျး ဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှခေဈြခငျအားပေးရတဲ့ နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမသရုပျဆောငျ ရိုကျကူးထားတဲ့ မုနျးစှဲ ရုပျရှငျဇာတျကားကလညျး ပရိသတျအားပေးမှုတှေ မြားစှာရရှိထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ပရိသတျတှအေတှကျ သရုပျဆောငျ အေးဝတျရညျသောငျး က သူမခဈြသူ ဆယျတနျးပွနျဖွဖေို့ပွောလာတဲ့ အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
သရုပျဆောငျအေးဝတျရညျသောငျးက ခုနောကျပိုငျးမှာ ရုပျရှငျဇာတျကားမြားစှာကို လညျး ရိုကျကူးနတောပါ။ ခုလတျတလော ပရိသတျတှကွေား နာမညျကွီးနတေဲ့ ဝတျလဲတျော ရှပေုဆိုး တနျးထိုးလို့ ကွို မယျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာလညျး ပါဝငျမှာ ဖွဈပွီး ၂၀၂၀ မှ စတငျရိုကျကူးဖွဈမယျလို့သိရပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ အေးဝတျရညျသောငျး က သူမခဈြသူ က ဆယျတနျးပွနျဖွခေငျြတယျလို့ သူမကို ပွောတဲ့ အကွောငျးကို ခုလိုဖျောပွထားပါတယျ။
” 👦🏻 ဆယျတနျးပွနျဖွခေငျြတယျ👩🏻 ဘာလို့?👦🏻 ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့ရအောငျပွနျဖွမေယျလေ။👩🏻 အမျ ဘာလို့????👦🏻 အခုလိုနမေကောငျးဖွဈတော့ ကိုယျ ကွညျ့ပေးလို့ရတာပါ့။👩🏻 ကွှေ ☺️စူပါဆနျးဒေးပါ။” ဆိုပွီးပွောထားပါတယျ။
ခဈြသူက သူမနမေကောငျးဖွဈနတောကွောငျ့ ဆယျတနျးကို ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့ရအောငျပွနျဖွခေငျြတယျ။ ဆရာဝနျဖွဈရငျ နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ သူမကို အနီးကပျကွညျ့ပေးလို့ရတယျ ဆိုပွီးပွောလာတယျလို့ ပွောထားတာပါ။
အေးဝတျရညျသောငျး ရဲ့ ခဈြသူဆယျတနျးပွနျဖွခေငျြရတဲ့ အကွောငျးကို ပရိသတျတှေ သိရလောကျပွီ ထငျပါတယျ ကွညျ့ရူပေးကွတဲ့ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။